Jawbone dia manolotra ny Mini Jambox, mpandahateny Bluetooth mini. | Vaovao IPhone
Jawbone dia nanolotra ny Mini Jambox vaovao azy, a bluetooth speaker izay mameno ny andiany "Jambox", miaraka amina habe tena kely, lehibe kokoa noho ny iPhone, ary azo entina hatraiza hatraiza ao anaty paosintsika. Araka ny nolazain'ny mpanamboatra azy manokana, "ny mpandahateny portable tsara indrindra dia ilay azonao entina miaraka aminao foana", ary ity maodely vaovao ity dia toa mahafeno io fepetra io.
Ny famolavolana ny Mini Jambox dia mitovy amin'ny an'ny zokiny lahy. hatrany koa ny bokotra ambony ambony, ary ny fifandraisana an-daniny, izay misy fidirana stereo 3,5mm sy port microUSB izay azo ampiasaina amin'ny famenoana ny fitaovana fotsiny. Izy io koa dia misy fifandraisana Bluetooth 4.0, noho izany dia kely ny fanjifana bateria, mahatratra hatramin'ny 10 ora ny fizakan-tena mitokana mozika, ary hatramin'ny 75 ora am-piomanana.
Toy ny mahazatra any Jawbone, ny mpandahateny dia misy amin'ny loko maro, samy manaitra kokoa, ary tsy vitan'ny manova ny loko fotsiny, fa koa ny volavolan'ny tontonana anoloana, miaraka amin'ny sary samihafa ho an'ny loko tsirairay. Ny Mini Jambox dia tsy mpandahateny kely tsara sy manana fahaleovan-tena tsara fotsiny, satria ny kalitaon'ny feo dia azo antoka kokoa, hoy ny mpamokatra, "ny feo tsara indrindra izay hita amin'ny mpandahateny ny habeny", ary raha mifanaraka izany, tsy kely izany. Sarimihetsika, lalao, feo ary mazava ho azy, ny mozika isan-karazany dia re miaraka amina kalitao tsara ao amin'ity mpandaha-teny kely ity.
Saingy tsy izany ihany, satria misaotra ny fampiharana Jawbone azo alaina ao amin'ny App Store (Tamin'ny fotoana nanoratanao an'ity lahatsoratra ity dia mbola tsy nisy izany tany Espana), afaka mahazo bebe kokoa amin'ny mpandahateny anao ianao. Tsy hampiseho aminao fikafika hifehezana azy tsara kokoa io, fa koa, ny fampiharana mamela anao hampivondrona ny Rdio, Spotify playlists ary ny mozika anao manokana iPhone, ary afaka mankafy azy ireo nefa tsy mila manova ny fampiharana.
Ny Mini Jambox dia ho hita amin'ny faran'ny volana septambra, amin'ny vidiny $ 179,99, ary azo tahirizina ao amin'ny tranokalan'i valanoranom-boriky teny.
Fanazavana fanampiny - Famerenana adaptatera Dolry. Ataovy mifanaraka amin'ny AirPlay ny mpandahateny anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Jawbone dia manolotra ny Mini Jambox, mpandahateny Bluetooth mini.